Tsika Bhodhi Mutambo
Enda zvakadzika murima nzvimbo uye uwane zvakavanzika zveiyo ngano- "DESCENT: Nhoroondo dzeRima"
Kunyangwe kunonoka kweDICE CON hachisi chinhu chitsva. Asi pandakaona varatidziri vakuru vachizivisa zvigadzirwa zvavo zvitsva imwe mushure meimwe, ndakanga ndichiri kurwadziwa pamoyo. Mitambo iyo inofanirwa kuratidzwa zvine mbiri pakuratidzira kwedu yakaburitswa nenguva (kupukuta misodzi). Nekudaro, isu patakagamuchira iyo (refu-a ...
Ndakadzokera kumashure makore churu akapfuura ndikave mutikitivha
Pandakanga ndiri mudiki, ndaishuvira zvakanyanya kuti ndive Conan, kuva nepfuti yake yekurinda yerudzi irworwo, uye mushure mekupfura mumwe munhu, ndakasimudza ndikatora maikorofoni ye bowtie, uye mushure mekufunga kwakasimba, ndakati: “Kune chokwadi chimwe chete. ” Pandakakura, ndakagodora Kogoro A ...
Rinenge riri iro rima bhiza reGore rino reSDJ Awards?
Mwedzi wapera, iyo SDJ yegore rose yakazivisa runyorwa rwevamiriri. Mazuva ano, mibairo yeSDJ yave iri vane yeiyo bhodhi mutambo wedenderedzwa. Vanhu vazhinji vanotonga mwero wemutambo kuti vaone kana wakakunda dzakasiyana bhodhi mutambo mibairo, tisingatauri mutambo weSDJ wakasarudzwa zvakanakidzwa nevatambi veGerman. Izvi imi ...
Vamwe vanhu vanombundirana pamwe chete, vamwe vanhu vanofuratira tafura, asi uyu uchiri wepachokwadi bhodhi mutambo.
Muna 2019, Will akazivisa zvirongwa zvekuburitsa "Pamir Runyararo: Yechipiri Edition" pane akasiyana magariro mapuratifomu. Mukutaurirana kwemashoko, mumwe mutengesi akamubvunza zvine mutsigo kana anga aine hurongwa hwekudhinda "kambani yaJohn". Akapindura, “Rimwe zuva. Asi zvinotora makore maviri lat ...
Chokwadi Board Game Geeks Ari Kutogadzira Mitambo paVo Chaivo Mari
Ngatidzokerei kuna Kubvumbi 2020. Panguva iyoyo, denda rakanga richangotanga kunze kwenyika, uye vanhu vakasungwa pamba vasina zvekuita. Uye vatambi vematafura havana zororo. Sezvo isu tese tichiziva, tafura vatambi mapfuti mahombe anozvigadzira yavo mepu mepu, mabhokisi ekuchengetera uye kunyangwe vakazvitsaurira matafura emitambo. Uye ...
Baba vane mwana vanogona kuunza "bhodhi mutambo wepasirese"
Mutambo, uyo unotengesa maseti gumi nemanomwe, wakashandura makumi mashanu gore rino
Muna 1971, mutaundi diki reCincinnati, Ohio, maive nevagari vazhinji veItari. Pakati pavo paive nemhuri yeRobbins. Vanoda kutamba kadhi mutambo unonzi Crazy Eight, asi ivo vanowanzo gakava pamusoro pekuchinja mutemo. Saka, vakagadzirisa mutemo uye vakaudana UNO. Paunenge uine kadhi rekupedzisira rasara, ...
Kylin mugadziri ndeye bhodhi mutambo mugadziri uyo anogamuchira zvakawandisa uye nemaitiro
Kylin anogadzira ane servise yakanakisa yatinogona kukuitira, chero dhizaini uye nekupa mutengo wefekitori. Tinotenda kuti kubudirira kutaurirana pakati pevagadziri nevatengi kunoenderana nekuvimbika uye kutendeseka. Kunyatso kutevedzera mutemo uyu kunotibvumidza kusangana nekusapfuura o ...
Kylin manufactory inyanzvi bhodhi mutambo mugadziri
Kylin manufactory inyanzvi yekugadzira uye kuburitsa kunze kwemutambo webhodhi, mitambo yemakadhi, makadhi ekutamba, zvikamu zvemitambo, mapepa evelvet art, bhokisi rekuputira, uye zvekushandisa. Isu tinomhanya mafekitori mana ekugadzira anosanganisira; kudhinda, huni, mari nemari. We pamwe zvinopfuura gumi mutambo zvikamu Pr ...